Maxaa Looga Hadlay Shirkii Golaha Wasiirrada? – Goobjoog News
Golaha wasiirrada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ku yeeshay magaaklada caasimadda ah ee Muqdisho, waxaana kulanka shir guddoomainaayey ra’iisalwasaare Maxamed Xuseen Rooble.
Kulanka ayaa waxaa looga hadlay arrimo ay kamid yihiin amniga doorashooyinka, khilaafka u dhaxeeyo dowladda Soomaaliya iyo Kenya iyo kaalinta uruka IGAD ay ku leeyihiin xalinta khilaafka u dhaxeeyo labda dhinac ee xadka.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa markii uu shirka soo idlaaday Warbaahinta u sharxay qodobada ka soo baxay shirka Golaha Wasiirada.
Cabdi Xaashi: Farmaajo Awooddiisa Kama Mid Ahan Waxkabedelka Awoodaha Dastuuri ah